Inkcubeko yaseRoma | Iindaba Zokuhamba
Izibonelelo kunye nezivumelwano
UMariela Carril | 14/09/2021 17:00 | isiko, eRoma
eRoma sesinye sezona zixeko zibalaseleyo eYurophu. Ndiyathandana nesi sixeko, asinakuba sihle ngakumbi, sinenkcubeko ngakumbi, sinomdla ngakumbi ...
IRoma intle kwaye namhlanje siza kuthetha ngayo Inkcubeko yaseRoma, ukwazi into ngaphambi kokuhamba.
2 Inkcubeko yaseRoma
Isixeko ngu ikomkhulu lommandla weLazio kunye ne-Itali kwaye sisixeko sesithathu esinabemi abaninzi kwi-European Union. Sisixeko esinamawaka amathathu eminyaka yembali kwaye sasiyi Idolophu enkulu yokuqala yoluntu, ukongeza kwintliziyo yenye yezona mpucuko zibalulekileyo nezinempembelelo mandulo.
Imbali ivela kwisitalato ngasinye, kwisikwere ngasinye, kwisakhiwo ngasinye. Sesona sixeko sinobuncwane bokwakha kunye nobembali ehlabathini kwaye ukusukela ngo-1980 bekukho kuluhlu lwe Ilifa leMveli YeUNESCO.
Ndicinga ukuba ngaphambi kokundwendwela ilizwe okanye isixeko umntu kufuneka afunde, enze uphando, afunde ulwazi malunga nendawo oya kuyo. Ke, sinokwakha isakhelo sokutolika kwinto esiya kuyibona okanye amava. Ayikucimi ukumangaliswa, okanye ukwazi, okanye uyolo. Ngokuchasene noko, iyenza ibe nkulu, kuba akukho nto intle kunokubona kumntu wokuqala into esiyaziyo kuphela ngeencwadi okanye uthungelwano lwasentlalweni.
IRoma yanamhlanje yi isixeko se-eclecticIndibaniselwano emnandi yendabuko kunye nexesha langoku. Kwinqanaba loluntu, Ubomi bujikeleze usapho kunye nabahlobo kwaye oko kubonakala ebantwini nakubomi bemihla ngemihla. Ngaphandle kokuba sisixeko esilikomkhulu, kukho umoya othile wedolophu enkulu esele, ngakumbi kwiindawo zobumelwane nakwiimarike zabo kwaye ngaphandle kokufika nokuhamba rhoqo kwabakhenkethi.
IRoma kunye nokutya zihamba kunye. Akukho nto intsha. I-gastronomy yaseRoma ilula, kodwa isityebi kunye nencasa eninzi. Ubomi boluntu bujikeleza kukutya, iintlanganiso, ukuthenga, emva kwesidlo sangokuhlwa. AmaRoma ahlala esidla kunye, kunye nosapho kunye nabahlobo, kwaye elo xesha lijikeleze itafile lixabisekile. Kwaye ukuba ufuna ukubona ezinye zezi, kungcono ukubaleka kwiivenkile zokutyela okanye kwiindawo ezithandwayo.
Ukufumana umgangatho kunye nokutya okuqinisekileyo kwamaRoma kuya kufuneka uhambe kwindlela ebethiweyo. Ezona ndawo zokutyela nokusela njengezasekhaya zihlala zingenabo abakhenkethi. Nazi ezinye zeendawo ezinconyelweyo: kwisidlo sakusasa ungazama i-Caffé Sab't Eustachio, kufutshane nePiazza Navona, esebenza ukusukela nge-30s. Isidlo sasemini, iLa Taverna dei Fori Imperiali, indawo yokutyela yosapho engekude neColosseum, nge-Vella della Madonna dei Monti, 9.
Ukuba ufuna ukuthenga nokutya kwisikwere okanye ngeenyawo, emva koko unokuthenga eFa-bio, kufutshane neVatican, eVía Germanico, 43. Kwisidlo sangokuhlwa, iLa Carbonara, indawo yokutyela yemveli yase-Itali eMonti, eVía Panispema, 214. Ukuba yi-pizza, Gusto, e-Piazza Augusto Imperatore, 9. I-ice cream elungileyo, i-Ciampini, phakathi kwe-Piazza Navonna kunye ne-Spanish Steps.
Malunga ne imibhiyozo kunye namaqela eRomaInyani yile yokuba kukho izithethe ezibaluleke kakhulu kumaRoma. Umzekelo, kukho ifayile ye- Carnivall, ekwabhiyozelwa kwilizwe liphela. Carnival eRoma ithatha iintsuku ezisibhozo Kwaye uza kubona iimvumi, iinkqubo zemidlalo yeqonga, iikonsathi ezahlukeneyo esitratweni. Lixesha elihle lokuhamba ezitratweni kwaye wonwabele umoya ochwayitileyo.
IKrisimesi kunye nePasika zezona holide zibalulekileyo zamaKristu esixekweni, ukongeza koko baphawula ukuqala kweeholide. Ukongeza, kuphekwe izitya ezikhethekileyo kula maqela mabini anje ngepanettone kunye ne-panforte kwiKrisimesi okanye isoseji yeCotechino, ngePasika iMinestra di Pasquea, imvana yeAngelo, isonka sePasika seGubana ... Yonke into esembindini weVia Crucis, ukusuka eColosseum ukuya kwiForam yaseRoma ngoLwesihlanu oLungileyo, intsikelelo kaPapa eSt.Peter's Square kunye nobusuku beKrisimesi ebusuku kwiicawa ezihonjiswe ngomkhumbi ...
Ngaphandle kweeholide zobuKristu IRoma ihlala iiholide zesizwe, ezilapha e-Italiya ziliqela. Isixeko ngasinye sibhiyozela ubungcwele basoKwimeko yaseRoma nguPeter oNgcwele kunye noPaul Paul. Iqela liyawa 29 ngoJuni kwaye kukho inyambalala yeecawa nkqu izixhobo zomlilo ukusuka eCastel San Angelo.
Ukutya, amaqela, abantu ... kodwa kuyinyani ukuba esinye isahluko senziwe nge ilifa lembali kunye nolwakhiwo Ngomnxeba IsiXeko esingunaPhakade. Bendihlala ndihamba iRoma, inyani yile yokuba kuphela zimbalwa izihlandlo apho ndithathe izithuthi zikawonkewonke. Hayi kuba iphazamisekile kodwa kuba ukuba imozulu intle kwaye unezihlangu ezintle, akukho ndlela yokulahleka ezitalatweni zayo. Wenza konke ukufumanisa!
Nguwe okanye ewe, iiklasikhi azinakho kwaye akufuneki ziphoswe: ndwendwela I-Pantheon, eyakhiwe nguHadrian ngo-118 BC, zivumele uhlanjwe kukukhanya okanye imvula engena ngomngxuma ophahleni, ukhwele ICapitoline Hill kwaye ucinge ngeForam, hlala kumanqwanqwa e- Amanyathelo eSpanish kwaye ubone i-Fontana della Barcaccia okanye indlu yeembongi uJhon Keats, ukhwele ibhayisekile okanye uhambe ecaleni Ukuhamba ngeAnticca, thatha uhambo emva kwemini I-piazza Navona, beka isandla sakho kwi IBocca della Verita, ndwendwela Coliseum, ukuba kunokwenzeka ukutshona kwelanga, ndwendwela Intengiso yaseCampo de Fiori, ngena iVatican, yiya kwifayile ye- iimyuziyam, la ICapuchin Crypt, jonga IGhetto yamaYuda kwiTrastevere, phosa ingqekembe yemali kwi Umthombo di Trevi.
Khumbula ukuba iRoma ineminyaka engamawaka amathathu yembali, ukusuka kwi-Antiquity, ukuya kwiminyaka yokuqala yobuKristu, i-Middle Ages, i-Renaissance okanye isahluko se-baroque yeso sixeko ukuya kumaxesha anamhlanje. Isakhiwo ngasinye, isikwere ngasinye, umthombo ngamnye, unembali yawo kwaye unikezela uphawu olwahlukileyo ngokwenene kwinkcubeko yamaRoma.
Ngokwendalo, uhambo olunye alonelanga. Kuya kufuneka ubuyele eRoma amatyeli aliqela, ngamaxesha ahlukeneyo onyaka. Uya kuhlala ufumanisa into entsha okanye uyithanda into osele uyazi. Lo mxube weemvakalelo phakathi kokwazi nokuqonda zezona zilungileyo.
Ngaba uyafuna ukubhukisha isikhokelo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » I dolophu » eRoma » Inkcubeko yaseRoma
Ndifuna ukufumana izibonelelo kunye neendleko zokuhamba kwi-imeyile yam
Ezona ntlango zintle eAfrika
Kutheni le nto kufuneka ube ne-inshurensi yekhaya?
Fumana iindaba kwi-imeyile yakho
Joyina iiViajes zenyani gratis kwaye ufumane iindaba zakutshanje malunga nokhenketho kunye nokuhamba kwi-imeyile yakho.
Fumana izibonelelo kunye nezibhengezo